Taliban: Vatorwa chete ndivo vanogona kubva kuAfghanistan kubva kuKabul airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Taliban: Vatorwa chete ndivo vanogona kubva kuAfghanistan kubva kuKabul airport
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutauriri weTaliban Zabiullah Mujahid
Taliban inodaidzira kuti masimba ekumadokero arege kubuda muAfghanistan vadzidzi vakadzidza, senge vanachiremba nemainjiniya.
Taliban hairege vaAfghans kuti vaende kuburikidza neKabul airport.
Taliban inoodza moyo maAfghan kubva pakutiza nyika.
VaTaliban vanoti vese vatorwa vanofanirwa kubva kuAfghanistan musi waAugust 31.
Mutauriri weTaliban, Zabiullah Mujahid azivisa nhasi kuti boka revapambi veIslam harizobvumidze maAfghans kupinda muKabul's Hamid Karzai International Airport mukuyedza kubva kuAfghanistan.
Achitaura neChipiri masikati, mutauriri weTaliban akati Taliban haichabvumidza maAfghans kuti abve munyika kuburikidza Kabul airport ndokudaidzira kumadokero kuti isakurudzire vadzidzi vane hunyanzvi kuti vatize. Mutauriri akarayira kuti masimba ekumadokero arege kubuda muAfghanistan vadzidzi vakadzidza, vakaita savanachiremba nemainjiniya.
Mujahid akati vatungamiriri veTaliban vakanga vasingadi kubvumidza maAfghan kuenda, asi vakadzokorora kuti vese vatorwa vanofanirwa kubviswa kubva Afuganisitani naAugust 31 uye aigona kuramba achishandisa Hamid Karzai International Airport kusvika panguva iyoyo yekupedzisira.
Mujahid akataurawo mamiriro ezvinhu anetsa panhandare yendege sechikonzero chevaAfghan kuzvidzivirira. Vakati vanhu vakatenderedza nhandare yeguta guru vanofanirwa kudzokera kudzimba dzavo, vachiti kuchengetedzeka kwavo kunovimbiswa.
Mumusangano mumwechete wevatori venhau, Mujahid akataura kuti vanhu vanogona kuramba vari muAfghanistan uye akavimbisa kuti hapazovi nekutsiva. Vati maTaliban akanganwa kukakavara munguva yakapfuura uye vaizorega zvakapfuura zvikaitika.
Akasimbisa zvakare kuti maTaliban anga asina kubvuma kuwedzera nguva yaNyamavhuvhu 31 yakatarwa neUS kuti vapedze kubuda kwavo kuAfghanistan.